Wanaagsan - waxaad bilowday ganacsi. Hadda maxaa? - Amjambo Africa
Bilaabidda meheraddu waa tallaabada ugu horreysa ee safarka socodsiinta meheradda, laakiin marka wajiga bilowga ka dib, milkiilayaasha meheraddu waxay u baahan yihiin inay qaadaan tillaabooyin kale si ay u hubiyaan in dadaal koodu guulaystay iyo in ganacsi goodu si hasami leh u socda.
Maqaalkan, waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah tillaabooyinkan. Shirkadaha guuleysta waxay xafidaan dhammaan dokumentiyada ganacsiga oo la habeyay oo la cusboonaysiyay. Dukumentiyada noocaas ah waxaa ka mid ah bayaannada maaliyadeed, shatiyada, qorsha yasha ganacsiga, miisaaniyada , iyo xaashiyaha dheelitirka. Tani waxay u saamaxaysaa milkiilaha meheradda inuu fahmo caafimaadka shirkadda maalin kasta, wuxuu xaqijiyay in hawlgallada maalinlaha ah ay u socdaan sidii loo qorsheeyay-ama u wargaliyaan milkiilaha dhibaatooyinka, haddii hawlgalladu aysan u socon sidii loogu tala galay. Haddii loo baahado kaalmo maaliyadeed, dukumiintiyadan ayaa kaa caawin kara xaqiijinta oggolaanshaha amaahda si ka dhakhso badan marka qofku bilaabay bilowga, luminta waqtiga inta uu aruurinayo dukumiintiyada. Intaa waxaa dheer, isla dokumenti yada ayaa loo isticmaalo doon in lagu xareeyo canshuraha meheradaha. Si aad u aragoto tuulooyinka dukumentiyada ganacsiga, akhri Diyaargarowgu waa Furaha Markaad Codsaneyso Amaah Ganacsi qaybta maaliyadda ee amjamboafrica.com.
Markaad meherad waddo, marka lagu daro hawl -maalmeedka joogtada ah, waxaa muhiim ah inaad ogaato inay jiraan kharashaad hawlgal iyo hawlo aan laga maarmi karin inay soo baxaan oo aan la filayn. Hawlaha joogtada ah waxaa ka mid ah maareynta qalabka iyo tas -hiilaadka, shaqaalaha iyo dheef aha, caymiska, mushaharka, iyo rasiidhada waxayna ku xiran tahay nooca ganacsiga. Laakiin maalin hore loo buuxiye waa in sidoo kale waqti loo qoondeeyo ka -qaybgalka hawlaha dheeraadka ah ee soo baxaya. Sidoo kale, lacag dheeraad ah waa in lagu shubaa dakhliga si loo huubiyo in kharashka hawlgalka la dabholi xita marka ay soo baxaan kharashaadka aan la filayn.
Milkiilayaasha meheraddu ma aha inay iyagu shaqooyinka oo dhan qabtaan – oo ay ku jiraan xirfadlayaal xul ah oo ku jira mushaharka ayaa bixin kara. Tusaale ahaan, xiriir la aasaasay xisaabiye ayaa kaa caawin kara hawlaha maaliyada ee herka sare ah sida qaabaynta noocyada ganacsiga iyo qorshaynta cashuurta. Diiwaan -hayeyaashu waxay ka shaqaysiin karaan mushaharka, waxay soo diri karaan qaansheegyada, waxayna gacan ka geysan karaan dheelitirka xaashida miisaaniyadda. Waxaa loo baahan yahay qareeno si ay u metelaan milkiilayaasha meheradda haddii uu jiro khilaaf ama haddii loo baahan yahay in la abuuro ama la saaxax heshiis, Si kale haddii loo dhigo – waxaa jira xirfadlayaal tababaran oo bixin kara taageero. Mararka qarkod mutadawiciin ayaa iya guna diyaar u ah inay ku caawiyaan
Ka -qaybgalka kooxda isku -xirka, iyo/ama sameynta xiriir lala yeesho lataliye, badiyaa waxay caawin weyn u noqon kartaa milkiilayaasha meheradaha. Kooxaha isku -xirka ayaa si joogto ah isugu keena xirfadlayaasha ganacsiga si ay uga wada hadlaan caqabadaha iyo fursadaha la xiriira socodsiinta meherada . Rugaha ganacsiga ee maxalliga ahi waxay abaabulaan kooxaha isku xirka iyagoo qayb ka ah bixinta xubinnimadooda.
Mararka qaarkood , dadku waxay abuuraan saaxiibtinimo nolosha oo dhan ah iyagoo dadka kula kulma kooxahan isku xirka.
Waxaa jira faa’iidooyin la taaban karo oo la heli karo marka lala shaqeynayo lataliye, taas oo ah xiriir ka dhexeeya qof ganacsade ah oo khibrad leh iyo milkiilaha meheradda. Helitaanka fikrad labaad oo ujeeddo leh, ama talo, waxay noqon kartaa mid wax tar leh marka dhibaato la soo gudboonaato, ama go’aan, lataliye ayaana bixin kara tan. SCORE -ka aan macaash doonka ahayn wuxuu siiyaa la -taliyayaal bixiya hagitaan khabiir oo lacag la’aan ah milkiilayaasha ganacsiga. Wax badan oo ku saabsan SCORE ka baro www.score.org.
PreviousKa -hortaga sonkorta, ogaanshaha, daaweynta.
NextMaxaa dhacaya Augusta kalfadhigan sharci-dejinta?